Maxkamada Mombasa oo xukun ka gartay nin loo hestay ganacsiga faloosha maroodiga – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamada Mombasa oo xukun ka gartay nin loo hestay ganacsiga faloosha maroodiga
Star FM July 23, 2016
Ganacsade kasoo jeedo Countiga mombsa ee gobolka xeebta ee dalka ayaa lagu xukumay 20 sano oo xarig kadib markii lagu helay dambiyadii lagu soo oogay.
Ninkan oo lagu magacaabo Faisal Maxamed Ali oo 47 sano jir ah ayaa sidoo kale lagu xukumay 20 milyan oo shilinka dalka, xukunkaasi ayaana kadambeeyay markii goor sii horeysay lagu helay foolal maroodi oo qiimihiisu lagu qiyaasay 44 milyan oo shilin.
Dhanka kale dad kale oo lala soo xiray Mr Faisal oo lagu kala magaaco Abdul Halim Sadiq, Ghalib Sadiq Kara, Praverz Noor Mohamed and Abdulmajeed Ibrahim ayaa la siidaayay kadib markii lagu waayay wax cedeymo ah oo la xiriirta dambiyadii lagu soo oogay.
Xaakinada Maxkamada Ms Diana Mochache ayaa shegtay in xukunkaasi uu qaarka kale ee ku howlan ka ganacsiga foolasha maroodiga uu u noqon doonto cashar ay wax kabartaan.
Ms Mochoche ayaa sidoo kale shegtay in cedeymaha loo cuskaday xukunka lagu riday Faisala uu kamid yahay macluum la xiriira teleefoonadii uu isticmaalayay intuu uu qorsheenayay ganacsigaasi uu ku doonayay in uu ku iibiyo fooalshaasi oo la sheegay in ay gaarayeen 2,000 oo klgrm.
Dhanka kale qareenadii u dooyay eedeysanahan oo lagu kala magacaabo Michael Oloo, Gikandi Ngibuini, Jared Magolo and Pascal Nabwana ayaa sheegay in ay racfaan ka qaadan doonaan xukunkaasi oo shalay kasoo baxay Maxkamada Mombasa.
← Qarax ka dhacay caasimada Kabul ee wadanka Afqaanistan oo ay 61 qof ku dhinteen
Raila o loogu baaqay in xilkan Madaxtinima uu an u tartamin doorashada soo socoto →